Umsebenzi oyinhloko psyche yomuntu yesimanje
Emkhakheni wezokwelapha nasemkhakheni wezindlela impilo ukulondolozwa yomuntu yesimanje linendima ebalulekile yengxenye psycho-ngokomzwelo, ukunakekelwa okuyinto ukusithatha wesayensi ezifana kwengqondo wezifo zengqondo. Uma phambi umsebenzi wokugcina kufanele iphathe ezihlukahlukene kwezinso kule mvelo, izifundo zesayensi uqale izifo ngqo izimbangela yizinambuzane, kanye izici zokuziphatha kwabantu, sakhe ngokwengqondo nangokomzwelo izingxenye, izenzo kanye nokuhuheka nezinkanuko.
Kunomsebenzi omningi ngale ndaba zisikisela ukuthi main umsebenzi psyche yomuntu Sekuyisikhathi eside wafundelwa futhi kuhlukaniswe, ukuze abafundi emanyuvesi ezikhethekile ngempumelelo ukufunda ngale ndaba. Nokho, naphezu kweqiniso lokuthi abantu past eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili, njalo ithuthukiswe futhi balandela indlela intuthuko kwezobuchwepheshe kanye namasiko, ijubane ukuphila kwakhe ucishe okufanayo, uvumela umuntu ukuba ngempumelelo ukuzivumelanisa nezimo ezishintshayo ekuphileni, futhi ukwamukelwa imihlola ezintsha futhi imiqondo. Njengoba ezweni lanamuhla futhi kuyindlela yokuphila, ijubane okusheshayo zonke kuyashesha ekukhuleni komphakathi kulolu hlangothi, kanye ngempumelelo wamavukelambuso emkhakheni isayensi nobuchwepheshe ngakolunye ngakho ngokushesha okushintsha umhlaba wethu, ukuthi umsebenzi oyinhloko psyche yomuntu ophucukile akuyona njalo ababulawa ezingeni lelifanele . Ngenxa yalokho, singabona isithombe lokho abantu abaningi asebebadala, owakhulela izimo ezahlukene ngokuphelele futhi zijwayele kushiwo ngejubane elifanayo ngaphezulu empilweni, awunaso isikhathi ukujwayela entsha. Lokhu kudala izinkinga eziningi, okuyinto namuhla uye cishe babe embulungeni yonke, futhi mhlawumbe, esikhathini esizayo esiseduze izohanjiswa iseluleko-World Health Organization.
Ngakho, iziphi Imisebenzi esemqoka psyche womuntu futhi yini umsebenzi wabo oyinhloko?
Avikelayo. Wonke umuntu kusukela ekuzalweni wabeka lo isazela self-ukulondolozwa, ngemuva nje kokuthi bavunyelwe ukuba basinde kule izimo ezimbi kakhulu we bakudala uhlelo ngokuhlanganyela. Futhi akusiyo nje mayelana ngokuvikelwa ngokwenyama, kodwa futhi izici ezingokwengqondo nezingokomzwelo. Psyche lomuntu ngamunye Umiswe ngendlela ukuze ulolonge zikhathi ezingemnandi, ukuvikela, ngaleyo ndlela, impilo yengqondo kusuka imizwelo engakhi: intukuthelo, ulaka, intukuthelo, nokunye.
Yokuziphatha (lithathelwe). Zonke siyazi ukuthi ngamunye wethu sokuthuthukiswa evamile futhi evumelanayo umphakathi kuyadingeka, ngoba sikhule enempilo ngokwengqondo umuntu enemisebenzi cishe kungenakwenzeka. Isihluthulelo ukuthuthukiswa futhi imfundo zokuxhumana, futhi umphumela waba ukuthi umuntu uthola ulwazi ewusizo hhayi kuphela, kodwa futhi kwenza ubuchopho bakho bacabanga futhi sihlaziye ezimweni ezihlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ngenxa observation nesifiso sokuzenza lezi zinto ithimba, abantu ngokungazi ukukopisha model of ukuziphatha kwabantu kanjalo bazivumelanisa nezimo ezintsha nokuhlalisana.
Ukucabanga. Kuyinto iyisici esibalulekile psyche womuntu, ngenxa-ke wakwazi ukunqoba izwe isilwane futhi abe uyisihluthulelo ekuthuthukiseni zomlando kule planethi yethu. Imisebenzi esemqoka umqondo ngempela zihlanganisa ukucabanga kwakhe eziphethweni ezingase ukuvumela buthelela isipiliyoni yazuza futhi baqhubeke behamba kuleyo ndlela siqu ukuthuthukiswa zabo zomqondo.
Abazi lutho. Naphezu kwesibalo eminingi etholakale kule ndawo, kanye imisebenzi Freud sasho futhi Carl Jung, eziningi izenzakalo of engakunakile abakakholiseki kuze kube sekupheleni alichaza isayensi yesimanje. Ngenxa wonke jikelele, imisebenzi eyisisekelo ingqondo indoda hhayi kuphela, kodwa futhi umphakathi wonkana, bavunyelwe ukuba babuthe ulwazi kule ndawo kusukela emhlabeni wonke, futhi base ulwazi yesimanje phakathi inombolo enkulu imihlola ezahlukene. Ngo wodwana futhi kufanele ukwaba enjalo mkhuba onemibuzo of psyche zabantu njengokungathi lokufunda ingqondo ibanga, umuzwa, levitation (indiza), njalo njalo.
Efingqa, kufanele kuphawulwe ukuthi umsebenzi oyinhloko yingqondo yomuntu phezu ezinkulungwaneni ezidlule zeminyaka ashintshiwe kancane Nokho, izimo zokuphila wanamuhla wabantu, ijubane okusheshayo emsebenzini futhi ishesha okuphakade kuholela sindisa kwengqondo. Kumele kukhunjulwe futhi ugweme ingcindezi ngokweqile emzimbeni wakho siqu. Ngakho-ke njalo ewusizo ubheke abezenhlalakahle, abazokwazi ngesikhathi ukunikeza umuntu omuhle iseluleko nosizo esimweni esinzima.
Ukukhetha eMiseni zokuzalanisa izitshalo: Izibonelo
Amandla imithombo. incazelo
Kuyini wenzuzo ithinta indlela ukuphila emphakathini?
Leggings kancane, sihloko stylish zokugqoka
Isikhungo Sokuthutha Kwezitimela eSt. Petersburg: izikhono kanye namakhono
"Tiovit Jet": yokusetshenziswa, ngempela
Yingakho kukhona ukukhula olimini
Taxi "Mostaksi": abasebenzi Izibuyekezo
Ingabe yezandla kusukela satin kudabuke ngezandla zabo: Rose
Kokucindezela Stockings. Ezemidlalo zangaphansi: yini esetshenziswayo futhi ngubani ofanele?
Inani kanye isitokwe ukulinganisa
Ukushintshwa kwemisebe izinto ezindala noma kanjani ukuze uwabuyise ekuphileni